Doowlada Soomaaliya oo ka carootay Booqashadii uu Uhuro Kenyatta ku tegay Dhoobleey
Home Somali News Doowlada Soomaaliya oo ka carootay Booqashadii uu Uhuro Kenyatta ku tegay Dhoobleey
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuri Kenyatta ayaa maalinimadii Sabtida March 18, 2017 gaarey wadanka Somalia isagoo halkaas kula kulmay ciidamada Kenya (KDF) kuwasoo kamid ah howlgalka nabad-sugida midowga Africa.
Uhuru Kenyatta oo booqashada ku tagey saldhiga cidmada Kenya ee ku yaal Dhoobley ayaa u mahad celiyey dadaalka Askartaan ugu jiraan difaacida dalkooda.
” Joogitaankiina Somalia waxa ku badbaadiseen naf badan oo shacabka Kenya ah iyadoo aad dadkiina ka xoreyseen baqdinta Al Shabaab” ayuu yiri madaxweyne Kenyatta Isagoo ku labisan dharka ciidamada KDF.
Hadaba wararka laga helayo Ilo diblomaasiyeed ee ku sugan dalka Kenya ayaa sheegaya in dowlada Federaalka Somalia ka carootey booqashada Madaxweynaha dalka Kenya ku tagey Dhoobley.
Wararka ayaa sheegaya in carada dowlada Somalia ee booqashadaan salka ku hayso madaama madaxweyne Uhuru Kenyata uusan la socodsiin Inuu galayo gudaha Somalia madaxda Federaalka iyo diplomaasiyiinta kale ee ku sugan Nairobi.